घाँटी थिची नर्सको हत्या, रिस नमरेपछि लाशसँग यौन सम्पर्क ! « News of Nepal
घाँटी थिची नर्सको हत्या, रिस नमरेपछि लाशसँग यौन सम्पर्क !
२८ वर्षकी नर्सको हत्या गरेपछि एक अधबैंसे व्यक्तिले उनको शवको नग्न फोटो खिचे, त्यसपछि शवसँगै यौन सम्पर्कको प्रयास गरे । ५१ वर्षका मलेसियाली नागरिक बोह कून होले आफूले ती नर्सलाई पहिले कहिल्यै नग्न अवस्थामा नदेखेकोले उनलाई नग्न अवस्थामा हेर्ने इच्छाका कारण उनलाई मारेको बयान दिएका छन् । अन्तराष्ट्रिय मिडिया द स्टारको मलेसिया संस्करणका अनुसार उनीमाथि लागेको हत्या अभियोगमाथि आज बुधबार उच्च अदालतमा पहिलो सुनुवाइ भएको छ ।
क्याफेटेरिनामा काम गर्ने ती व्यक्तिलाई चिनियाँ नर्स झाङ हुआजियाङको २०१६ मार्च २१ मा सिंगापुरको सर्किट रोडमा रहेको भाडाको फ्ल्याटको बेडरुममा घाँटी थिचेर हत्या गरेको अभियोग लगाइएको छ । यो अभियोग प्रमाणित भएमा उनलाई आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय हुन सक्छ । ‘यो इष्र्या, रिस र अतृप्त इच्छाका कारण गरिएको हत्याको मुद्दा हो’ डेप्युटी पब्लिक प्रोसिक्युटर वोङ कोक वेङगले अदालतमा भनेका थिए ।
अदालतमा बताइएअनुसार बोहले झाङलाई आफ्नी गर्नफ्रेण्ड सम्झिन्थे । उनीहरु साथमा सपिङ गर्न जाने, साथमा खाजा खाने गर्थे । बोहले झाङलाई गिफ्ट पनि दिन्थे जसका कारण उनी झाङलाई आफ्नी गर्लफ्रेण्ड ठान्थे तर उनीहरुबीच कहिल्यै शारीरिक सम्पर्क भएको थिएन । उनीहरु २०११–२०१२ तिरबाट परिचित थिए । त्यतिबेला झाङले पनि बोहसँगै सिंगापुरको मारिना बे स्ट्याण्ड रिसोर्टको क्याफेटेरिनामा काम गर्थिन् र नर्सिङ पढ्दै थिइन् । ग्रयाजुएशन गरेपछि उनले नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा काम गर्न थालिन् ।
हत्याको केही दिन अघि मार्च १८ का दिन बोहले झाङलाई अर्कै एक व्यत्तिःसँग ट्याक्सीमा कतै जाँदै गरेको देखे । यो कुराले उनलाई इष्र्या भयो र उनलाई लाग्यो कि झाङले उनलाई धोका दिइरहेकी छिन् । उनले त्यसपछि झाङलाई आफूकहाँ मार्च २१ मा लञ्चमा जानको लागि बोलाए । जब उनले आफ्नो कोठामा झाङले कपाल कोरिरहेको देखे, उनले त्यहीँ झाङसँग यौन सम्पर्कको प्रयास गरे । तर, झाङले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उनलाई गाली गरिन् ।
१० मिनेटपछि बोहले पुनः उनलाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरे । उनले झाङको घाँटीमा पाखुराले समातेर आफ्नो कोठातिर तान्न थाले तर झाङले प्रतिवाद गरिरहिन् । बोहले झाङसँग ट्याक्सीमा गएका व्यक्ति को हुन् भनेर सोध्दा झाङले आफू ती व्यक्तिसँग पहिले पनि ४–५ पटक बाहिर गएको बताइन् । झाङले आफू अहिले पनि चीनमा रहेका पूर्व प्रेमीसँग सम्पर्कमा रहेकोर आफूहरुका लागि यौन सम्बन्ध सामान्य रहेको पनि बताइन् । यो सुनेपछि बोहको पारो तात्यो । बोहले एउटा टावेल लिए, त्यसलाई झाङको घाँटीमा बेरे र उनको प्राण नजाँदासम्म करिब २ मिनेट अँठ्याइरहे । झाङको मृत्यु भएपछि उनले शवलाई बेडमा राखे । बोहले शवको कपडा खोले । उनलाई अझै पनि झाङसँग यौन सम्पर्क गर्न मन लागिरहेको थियो ।
उनलाई लाग्यो कि अब उनले आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सक्छन् किनकि अब झाङले उनको प्रतिवाद गर्न सक्दिनन् । यद्यपि, झाङको मृत्यु भइसकेको र शवमा नियन्त्रण नहुँदा बोहले यौन सम्पर्क गर्न भने सकेनन् । आफ्नो प्रयासमा असफल भएपछि बोहले झाङलाई पेन्टी लगाइदिए र शवलाई ब्लांकेटले ढाके । त्यपछि कपडाहरु वाशिङ मेसिनमा धुनको लागि हाले । बोहले त्यसपछि सिंगापुर नै छाडेर जाने तयारी गर्दै आफ्नो सामान प्याक गरे । उनले झाङको फोन र पैसा आफूसँगै राखे ।
उनले आफ्ना सुपरभाइजरलाई आफू १ महिनाको लागि मलेसिया जान लागेको भन्दै म्यासेज गरे । त्यसपछि आफ्नो घरमालिकलाई आफूले केही दिनमा कोठा खाली गरिदिने भन्दै फोन गरे । बोह त्यसपछि गेलाङ गएर एउटा सुटकेस किनेर कोठामा फर्किए । बोहले पहिले त शवलाई सुटकेसमा राखेर लैजाने र सेम्बावाङमा फाल्ने सोच बनाए । तर, शव कठोर भइसकेकोले सुटकेसमा राख्न सकेनन् । त्यसपछि उनले शव टुक्रा टुक्रा पारेर सुटकेसमा राख्ने पनि सोच बनाए तर त्यसो गर्न सकेनन् । बोहले त्यसपछि त्यो रात लाशसँगै सुतेर बिताए ।
भोलिपल्ट मार्च २२ को दिन उनले शवलाई कपडा लगाइदिए । शवलाई एउटा ब्लांकेटले ढाके र उनलाई स्वर्गमा शान्तिसँग बस्न भने । त्यसपछि उनी एक साथीलाई भेटेर केही सामान बेच्न बाहिर गए । साथमा उनी आफ्नो तलब लिन पनि गए । १०ः५० बजेतिर बोह कोठामा फर्केर आए । उनले फर्केर आएपछि झाङको शरीर र निधारमा किस गरे । उनले शवलाई कोठामै छाडेर कोठाको बत्ती र एसी खुलै छाडे । त्यसपछि बोहले उडल्याण्डस चेकप्वाइन्टसम्मको लागि ट्याक्सी लिए । कस्टम पार गरेपछि अर्को ट्याक्सी लिएर मालाक्कामा आफ्नी बहिनीकहाँ गए । बहनिीलाई उनले आफ्नो अपराधबारे बताए । बहिनीले उनको लागि बस्न भाडाको कोठा खोजिदिइन् । त्यसै दिन बेलुका बोहका घरमालिक चाइ योङ सियोङले बोहको बेडमा कोही सुतिरहेको देखे र बोह नै सुतिरहेको ठाने ।
एक घण्टापछि डिनरबाट फर्किएका र्चाले बोह ठानेर सुत्नेलाई बोलाए । कुनै जवाफ नआएपछि उनले ब्लांकेट ताने । ब्लांकेटभित्र शव भेटिएपछि उनले पुलिसलाई बोलाए । भोलिपल्ट बिहान चाइलाई बोहको फोन आयो । फोनमा बोहले आफूले झाङको घाँटी थिचेर मारेको र आफू क्वालालम्पुरमा भएको बताए । चाइले पुलिसलाई सम्पर्क गरे र बोहको फोन आएको बताउँदै बोहले फेरि फोन गरेमा के भन्ने भनेर सोधे । चाइले बोहको मलेसियाको नम्बरमा पुलिस आएको बताउँदै म्यासेज पनि पठाए । २ः१० बजे बोहले चाइलाई फोन गरे र उनीहरु करिब १० मिनेट कुरा गरे । त्यो कुराकानी पुलिसले रेकर्ड गरेको थियो ।
चाइले बोहलाई दुई हप्तासम्म निरन्तर म्यासेज गरिरहे । यसरी भएको कुराबारे चाइले पुलिसलाई सबै सूचना दिइरहेका थिए । अप्रिल ४ का दिन एक रेष्टुरेण्टमा डिनर गरिरहेका बेला बोहलाई मलेसियन पुलिसले समात्यो । भोलिपल्ट उनलाई सिंगापुर लगियो । इन्ष्टिच्युट अफ मेन्टल हेल्थको रिपोर्ट अनुसार बोह मानसिक रुपमा अशक्त छैनन् र कुनै मानसिक रोगबाट पनि पीडित छैनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । उनले पुलिसलाई दिएको बयानमा आफूले इष्र्या र रिसका कारण बोहको घाँटी थिचेर हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । एजेन्सी
अध्यादेशबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन माग
दूध खपतका लागि छुर्पी उद्योग
नेपाल बारिस्ता एकेडेमी अब दाङमा पनि